Maraykanka oo ka hadlay weerarkii Al-shabaab ee saldhigga xeebta Lamu ee Kenya | RADIOKISMAAYO.COM
Published on January 6, 2020 by admin · No Comments
Dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay weerar saaka lagu qaaday saldhiga Manda Bay oo ku yaalla deegaanka Lamu ee gobolka xeebta Kenya.
War qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in uu jiro weerar ay Al-Shabab ku qaadeen Saldhigaasi
Bayaanka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in Militariga Kenya iyo kuwa Mareykanka ay iska caabiyeen weerarkaasi Al-Shabab.
Warka kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa lagu beeniyay sheegashada Al-Shabab ee ah in weerarkaasi ay khasaaro ku geysteen taasi oo Mareykanka ku tilmaameen “buun-buunin”.
“Al-Shabaab waxay miciin bideen been, si ay sare ugu qaadaan sumcadooda ayna u abuuraan cinwaano been abuur ah,” waxaa sidaasi sheegay Janaraal William Gayler, oo ah agaasimaha AFRICOM.
“Waa muhim in looga hortago Al-Shabab meesha ay joogaan si looga hortago fidida Kansarka” ayaa intaa ku daray.
“Al-Shabaab waa urur argagixiso oo arxan,” ayuu yiri Janaraal Gayler.”
Bayaanka ay Mareykanka soo saareen ayaa lagu xusay inuu jiro waxyeelo dhanka qalabka ah oo weerarkaasi ka dhashay ayna imika socoto qiimeynta arrintaasi,islamarkana faafaahinta dib laga soo sheegi doono.
Ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku saldhig ay leeyihiin ciidammada badda oo ku yaal deegaanka Lamu ee waddanka Kenya, kaas oo ay wada deggan yihiin ciidamada Mareykanka iyo Kenya.
Weerrarka lagu qaaday saldhigga Simba ee degmada Manda Bay ayaa waxa uu dhacay waxyar ka hor inta uusan waaga baryin.
Sarkaal ka tirsan Dowladda deegaankaas oo lagu magacaabo Irungu Macharia, ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay weli ku jiraan howlgalkaas, wuxuuna diiday inuu xaqiijiyo in ay jirto cid weerrarkaas ku waxyeelowday.
Bar internet-ka ah oo lala xiriiriyay ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegtay in qeybta is-qarxinta ee ururkaasi ay khasaare culus gaarsiiyeen saldhiggaasi sida ay sheegteen.
Tags: weerarkii laamu